(src)="1.1"> ၁ ​ ဝ ​ ရက်၊
(src)="1.2"> ​ ၁ ​ ဝ ​ လ ၊
(trg)="1.1"> Мир : Один День на Земле 10.10.10
(src)="1.3"> ​ ၁ ​ ဝ ​ ခု ​ နှစ်​ အတွက်ကမ္ဘာ ​ မြေ ​ ရဲ့ရက်​ တစ်​ ရက ်
(trg)="8.1"> Еще есть время , чтобы зарегистрироваться и принять участие в событии , а Мэт Ламберт с блога Motionographer уже подводит итоги :
(src)="2.1"> ကမ္ဘာမြေရဲ့ရက်တစ်ရက်စီမံကိန်းစရန်တစ်ရက်သာ လိုတော့သည်၊
(trg)="8.2"> Результатом этого проекта будет совместный видео архив , который можно будет скачать для некоммерческого использования для креативных или оброзовательных целей - фильм сообщества киносоздателей и воодушевленных граждан , фильм , изучающий нашу глобальную эдентичность благодаря общему медиа-событию .
(src)="2.2"> ထိုနေ့တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လူများသည်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကြမည်ဖြစ်ပြီး ၊
(trg)="8.3"> Однико , согласно этому клипу , чтобы получить доступ к кладу знаний , нужно будет загрузить минутный ролик в течение 10.10.10 .
(src)="2.3"> သူတို့ထံသို့ပို့ကြလိမ့် မည်။
(trg)="8.4"> Не упустите свой шанс !
(src)="3.7"> သို့မဟုတ်၊
(src)="1.1"> တောင်​ အာ ​ ရှ ၊
(trg)="1.1"> Южная Азия : блогеры обсуждают проблемы с водой
(src)="2.1"> ဘလော့ဂ်လှုပ်ရှားမှုနေ့သည်အောက်တိုဘာ ​ လ ၁ ​ ၅ ​ ရက်​ ၌ အကြောင်းအရာ ​ တစ်​ ခု ​ တည်း ​ နှင့် ပတ်သက်​ သည်​ ကို တစ်​ နေ့​ တည်း ​ တွင်ရေးသား ​ လွှင့် ​ တင်​ ကြ ​ သော ကမ္ဘာ ​ ဘ ​ လော့ဂ်​ ရေး ​ သူ ​ များ ​ စုစည်း ​ ပြီး နှစ်စဉ်​ ကျင်းပ ​ သော အစီ ​ အစဉ်​ တစ်​ ခု ​ ဖြစ်​ သည်။
(trg)="1.2"> Blog Action Day ( Всемирный День Действия ) - это ежегодное событие , которое проводится 15 октября и объединяет блогеров со всего мира с целью написания постов на одну и ту же тему , в один и тот же день .
(src)="3.3"> ဖ ​ လစ်​ ကာ ​ အသုံးပြု ​ သူ mckaysavage ၏ ဓာတ်​ ပုံ ။
(trg)="1.3"> В этом году темой действия была вода .
(src)="5.1"> အိန္ဒိယမှ ရေသည်သမ္မု ​ တိ ​ ဝိ ​ ရော ​ ဓိ ​ သဘော ​ ဖြစ်​ သည်။
(trg)="1.5"> Давайте помотрим , что именно некоторые из них обсуждали .
(src)="5.4"> တောင်​ အိန္ဒိယ ​ က စီး ​ ဆင်း ​ လာ ​ သော မြစ်​ များ ​ အတွက်တိုက်ခိုက်​ သည်။
(trg)="2.1"> Сосуды для воды , выстроенные в одну линию в Мамаллапураме , Индия .
(trg)="2.2"> Фото пользователя mckaysavage , Flickr .
(trg)="2.3"> Индия :
(src)="5.5"> အနောက်မြောက်​ အိန္ဒိယ ​ မှာ ​ မူ ရေ ​ ပြတ်လပ်​ နေ ​ သော သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ ဖြစ်​ နေ ​ သည်။
(trg)="2.4"> Ishrath пишет на at Wandering Mist :
(src)="6.1"> ၎ င်း အချက်​ များ ​ အပြင်အိန္ဒိယ ​ ရှိ ရေ ​ ဒုက္ခ ​ များ ​ တွင်သန့် ရှင်း ​ သော ​ ရေ ​ မ ​ ရ ​ ခြင်း ၊
(trg)="3.1"> Вода в Индии это парадокс .
(src)="6.2"> မ ​ လုံလောက်​ ခြင်း ၊
(src)="6.3"> လက်သင့် ​ မ ​ ခံ ​ ခြင်း ၊
(trg)="4.1"> Она всегда была благом и проклятием для всей нации .
(src)="6.4"> လာဘ်​ စား ​ ခြင်း ၊
(src)="6.5"> သယ်ယူ ​ ရ ​ ခက်​ ခြင်း ၊
(trg)="4.2"> Вода берет свое начало в Северной Индии .
(src)="6.6"> သုံးစွဲ ​ ခြင်း ၊
(trg)="4.3"> Южная Индия борется за реки , которые текут .
(src)="6.7"> သေ ​ ဆုံး ​ မှု ​ နှင့် ရောဂါ ​ များ ၊
(src)="6.8"> ညစ်ညမ်း ​ ခြင်း ၊
(trg)="4.4"> Северо-Запад Индии - это безводная пустыня .
(src)="7.2"> ထို ​ အချိန်​ က အဆုံး ​ မ ​ ရှိ ​ နိုင်​ သော ရေချိုး ​ ခန်း ​ မှ ရေပန်း ​ များ ၊
(src)="7.3"> ရေနွေး ​ ရေချိုး ​ ကန်​ များ ၊
(trg)="4.5"> А в Восточной Индии самое большое количество осадков , что никому не помогает .
(src)="7.5"> သို့မဟုတ်လျှော်​ ဖွပ်​ နေ ​ ချိန်း ​ အတွင်း ရေ ​ လာ ​ နေ ​ သည်​ ကို သိ ​ နိုင်​ ရန်​ ဖွင့် ​ ထား ​ သော ရေကန်​ ကြီး ​ များ မ ​ ရှိ ​ ခဲ့​ ပါ ။
(trg)="6.1"> Мы забыли наш образ жизни , когда каждый из природных ресурсов , в частности вода , использовался рационально .
(src)="7.6"> ရေ ​ ကို သုံးစွဲ ​ မှု ​ အလိုက်အချိုး ​ ချခဲ့​ ကြ ​ သည်။
(trg)="6.3"> Вода была нормирована для использования .
(src)="7.8"> ကျွန်တော်​ တို့​ သည်ဗ ​ ဟု ​ သုတ ၊
(trg)="6.5"> Мы сознательно и отвественно постоянно превращаем землю в сущий ад .
(src)="9.2"> အဘ္ဟ မိ ​ ဒ ​ က သတင်းပေးရေးသားခဲ့သည်​ မှာ
(trg)="8.2"> Abha Midha информирует :
(src)="11.1"> ရေ အကျပ်အတည်း ​ သည်နီ ​ ပေါ ​ ၏ ပတ်ဝန်းကျင်​ ညစ်ညမ်း ​ မှု ​ နှင့် တိုက်ရိုက်​ သက်ဆိုင်​ နေ ​ ပါ ​ သည်။
(trg)="8.5"> Ujjwal Acharya разместила фото , показывающее , как вода необходима для ежедневных нужд .
(src)="11.3"> ရေ ​ သန့် ရှင်း ​ မှု ​ ကို စောင့် ​ ကြည့် ​ စစ်ဆေး ​ ခြင်း ​ မ ​ ပြု ​ နိုင်​ သော ဒေသ ​ တွင်းရေ ​ တွင်း ​ များ ​ နှင့် မြစ်​ များ ​ ကို အား ​ ထား ​ ရန်​ ဖြစ်​ စေ ဖိ ​ အားပေး ​ ခံ ​ နေ ​ ရ ​ သည်။
(trg)="8.6"> Пакистан :
(trg)="8.7"> Хотя Пакистан переживает сильнешее за последнее столетие наводнение , некоторые его районы страдают от засухи и опустынивания .
(src)="13.2"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန်၊
(src)="14.1"> ပြီး ခဲ့​ သော ​ ရာ ​ စု ​ နှစ်​ များ ​ တွင်ပါ ​ ကစ္စ ​ တန်​ သည်အဆိုး ​ ဆုံး ​ ရေ ​ ကြီး ​ မှု ​ နှင့် ကြုံတွေ့​ ခဲ့​ ရသော်​ လည်း ယင်း ​ ဒေသ ​ အချို့​ သည်ခြောက်သွေ့​ ကာ သဲ ​ ကန္တာ ​ ရ ​ ပုံ ​ ပြောင်း ​ ခြင်း ​ နှင့် ရင်ဆိုင်​ နေ ​ ရ ​ သည်။
(src)="14.2"> ပါ ​ ကစ္စ ​ တန်၊
(trg)="8.8"> Местная девушка из Балочистана , Пакистан Khalida Brohi замечает , что местные жители первые , на ком изменение климата сказалось сильнее всего :
(src)="15.4"> အဘယ်​ ကြောင့် ​ ဆိုသော်ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ မှု ​ သည်လား ​ ရာ ​ ပြောင်း ​ သွား ​ ခဲ့​ ပြီး ယခု ​ အခါ ပညာ ​ ရှင်​ များ ​ ပင်​ လျှင်မည်​ သည့် ​ ဒေသ ​ သည်ရေ ​ လွှမ်းမိုး ​ ခံ ​ ရ ​ မည်​ ကို ခန့် ​ မှန်း ​ နိုင်​ ခြင်း မ ​ ရှိ ​ တော့​ ဘဲ ဘာ ​ လု ​ ချိ ​ စ ​ တန်​ တောင်​ ကြား ​ ရှိ ​ လူ ​ များ ​ အတွက်ကောင်း ​ ချီး ​ ဖြစ်​ ခဲ့​ ဖူး ​ သော တောင်တန်း ​ များ ​ သည်ယခု ​ အခါ သဘာ၀ ​ ဘေး ​ အန္တရာယ်​ ၏ အန္တရာယ်​ ဖြစ်​ နေ ​ တော့​ သည်။
(trg)="8.10"> Других альтернатив нет , и рытье не представляется невозможным .
(trg)="8.11"> Даже если и получится , то вода является настолько противной и соленой , что ее невозможно пить .
(trg)="1.1"> Марокко : студенты требуют реформы системы образования
(src)="1.3"> ဇူလိုင်လတွင်မော်ရိုကိုကျောင်းသားတစ်စုသည်" ပညာရေးစနစ်ကို ပြောင်းလဲမည့် မော်ရိုကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂ " ( ပြင်သစ်စကားဖြင့် အတိုကောက်UECSE ) ဟုခေါ်သည့် ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) စာမျက်နှာကို ဖွင့် လှစ်ခဲ့သည်။
(trg)="1.2"> В июле группа марокканских студентов создала страницу в Facebook , назвав ее “ Союз марокканских студентов для изменения системы образования " ( французское сокращение : UECSE ) .
(src)="1.4"> ထိုအဖွဲ့သည်" ပညာရေးစနစ်ကို တိုးတက်စေရန်ခိုင်မာသော နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်မည့် " မော်ရိုကိုလူငယ်များကို စုစည်းလျက်ရှိသည်။
(trg)="1.3"> Группа представляет собой собрание молодых марокканцев , целью которых является " действие и обсуждение конкретных решений для улучшения системы образования " .
(src)="2.1"> တစ်လထက်မပိုသော အချိန်အတွင်းတွင်၊
(trg)="2.1"> Менее чем за месяц страница привлекла свыше 10 000 пользователей и получила большую поддержку в социальных медиа .
(trg)="3.1"> Кажется , что импульс был вызван новостью о планах властей ужесточить политику относительно стоимости обучения в государственных университетах .
(src)="4.1"> ထိုအဖွဲ့က " စနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်များကို အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်စတင်ရန်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့် မော်ရိုကို အစိုးရလက်ရွေးစင်များကို အားပေးရန်" နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ကို ဩဂုတ်လ ၆ရက်၊
(trg)="4.1"> Группа призвала к общенациональной манифестации6августа 2012 года для " призыва гражданского общества и марокканской политической элиты к открытым народным дебатам о мерах для реформирования системы " .
(trg)="5.1"> Призыв был распространен через социальные сети .
(src)="6.2"> " ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးက ပြောင်းဖို့လိုနေတာပါ " ဟု ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ကင်မရာကိုကြည့် ၍ ပြောသည်။
(trg)="6.2"> " Вся система образования должна быть изменена , " - говорит студент перед камерой .
(src)="6.3"> " ဒီစနစ်တစ်ခုလုံးကို အားလုံးပိုင်းချလိုက်ပြီး ဟိုးအစကနေ ပြန်တည်ဆောင်ဖို့လိုတယ်" ဟု အခြားတစ်ယောက်က ဆိုသည်။
(trg)="6.3"> " Эту систему надо полностью сломить и построить с нуля , " - говорит другой .
(src)="7.1"> ဆန္ဒပြသောနေ့တွင်အင်တာနက်တွင်ဝေမျှထားသော မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံများ ၊
(trg)="7.1"> В день протеста сотни студентов и их родителей ответили на призыв , что задокументировано на выложенных в Интернете фотографиях и видео .
(src)="8.2"> မျက်နှာလိုက်မှု ၊
(src)="8.3"> ညံ့ဖျင်းသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် အဆင့် မြင့် ပညာရေးတက်ရောက်ရန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ထားရှိသော ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ရှုံ့ချသည့် မတူကွဲပြားသော ဆောင်ပုဒ်များကို ပြသလျက်ရှိသည်။
(trg)="8.1"> Фотографии , опубликованные на Flickr Хассаном Оуззани , демонстрируют большое разнообразие лозунгов , осуждающих коррупцию , фаворитизм , плохую инфраструктуру и жесткие рамки для поступления в ВУЗы .
(src)="9.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(trg)="9.1"> Марокканские студенты призывают к реформе системы образования .
(src)="11.1"> ပညာရေးစနစ်ပြောင်းလဲမှုအတွက်တောင်းဆိုနေသော မော်ရိုကိုကျောင်းသားများ ၊
(src)="12.1"> ဆန္ဒပြမှုသည်ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။
(trg)="12.1"> Демонстрация прошла спокойно .
(src)="13.1"> တမ်ဘလာတွင်လည်း UECSE ကရေးသားခဲ့သည်မှာ ၊
(trg)="12.2"> Протестующие обещают провести сидячие забастовки и круглые столы по всей стране .
(src)="13.2"> လူငယ်ကျောင်းသားတွေက ပညာရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို တောင်းဆိုနေကြတာ ၊
(trg)="13.1"> На сайте Tumblr союз UECSE пишет :
(src)="13.4"> သူတို့အနာဂတ်ကို ပြောင်းလဲပြီး အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်၊
(trg)="13.2"> Молодые СТУДЕНТЫ просят хорошую систему образования , они - МАРОККАНСКИЕ СТУДЕНТЫ , уставшие от настоящей ситуации , они хотят изменить своё будущее и достигнуть свои мечты .
(src)="1.1"> ဖိ ​ လစ်​ ပိုင်၊
(src)="1.2"> နိုင်ငံ ​ တကာ ​ ပျောက်​ ဆုံး ​ သူ ​ များ ​ နေ့​ အတွက်ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) မှ ​ ဓာတ်​ ပုံ ​ များ ဖြုတ်​ ချ
(trg)="1.1"> Филиппины : в международный День пропавших без вести с Facebook убраны фотографии
(src)="2.1"> ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) အသုံးပြုသူများသည်လွန်ခဲ့သော သြဂုတ်လ ( ၃ဝ ) ရက်နေ့က ဖိနှိပ်ခံ ပျောက်ဆုံးမှုမှ ဓားစာခံများအတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအလို့ငှာ မိမိတို့ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) မှ ဓာတ်ပုံများကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြသည်။
(trg)="2.1"> Пользователи сайта Facebook на Филиппинах удалили 30 августа фотографии со своих профилей , требуя справедливости для жертв , пропавших в результате насилия .
(trg)="3.1"> Онлайн-кампания была проведена в рамках международного Дня пропавших без вести для проявления солидарности с близкими и друзьями пропавших людей .
(src)="3.1"> ထိုအွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုကြီးသည်နိုင်ငံတကာပျောက်ဆုံးသူများနေ့နှင့် ကိုက်ညီနေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပျောက်ဆုံးသူများ ၏ မိတ်ဆွေများ ၊
(trg)="4.1"> Кроме того , это политическая акция , приуроченная к 40-й годовщине введения покойным диктатором Фердинандом Маркусом военного положения на Филиппинах .
(src)="4.2"> လှုပ်ရှားမှု ၏ ဦးတည်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(trg)="4.2"> Среди целей кампании стоит отметить следующие :
(src)="5.1"> - မာကို့( စ်) နှစ်များတွင်ရက်စက်ယုတ်မာသောစည်းကမ်းများချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် အဓိကကျသောလူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းတို့ကို အမှတ်ရစေရန ်
(trg)="5.1"> - помнить об открытых тиранических правилах и грубых нарушениях прав человека в годы правления Маркуса ;
(src)="7.1"> - လူအခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှု အသွင်မျိုးစုံကို တားဆီးနိုင်ရေးနှင့် ဓားစာခံများနှင့် ၄င်းတို့မိသားစုများတို့အတွက်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရန ်
(trg)="6.1"> - размышлять и изучать преобладающую атмосферу безнаказанности и повсеместного нарушения прав человека нынешней администрацией Акино ;
(src)="8.3"> များစွာသော လူထုအဖွဲ့အစည်းတို့သည်မနီလာမြို့နှင့် အခြားအဓိကမြို့များတွင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။
(trg)="7.1"> - сопротивляться всем формам нарушения прав человека и добиться справедливости для жертв и их родственников .
(src)="10.1"> ၂ဝ၁ဝသမ္မတ အကွီနိုလက်ထက်မှစတင်ပြီး မှတ်တမ်းများအရ ဓားစာခံ ( ၁၁ ) ယောက်ကျော်ပျောက်ဆုံးခဲ့မှုများနှင့် မြင့် တက်လာသော လှု့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုတို့အပေါ်ကဲ့ရဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
(trg)="8.1"> Защитники прав человека , семьи и друзья жертв различных нарушений прав человека , а также различные организации провели акции протеста в Маниле и других крупных городах страны .
(src)="12.2"> စစ်အာဏာသိမ်းချိန်မှ ယနေ့အချိန်ထိ တရားမျှတမှုကို တစိုက်မတ်⁠ မတ်ရှာဖွေနေကြသော ပျောက်ဆုံးသူများ ၏ မိတ်ဆွေများ ၊
(trg)="10.1"> Они осудили случаи нарушения прав человека , в результате которых с начала президентского срока Нойной Акино в 2010 году задокументирована пропажа 11 человек .
(src)="12.3"> မိသားစုများနှင့် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသနိုင်ဖို့လာမည့် သြဂုတ်၃၀ရက်နေ့တွင်မိမိတို့ဖေ့( စ်) ဘွတ်( ခ်) မှ ဓာတ်ပုံကို ဖြုတ်ပေးကြပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(trg)="11.1"> Джей Куеста попросил друзей в Facebook удалить фотографии из профилей в знак поддержки кампании за справедливость и права человека :
(src)="12.5"> သြဂုတ်လ ၃၀ရက်နေ့သည်နိုင်ငံတကာ ပျောက်ဆုံးသူများနေ့ဖြစ်သည်။
(trg)="12.3"> 30 августа является Международным Днем пропавших без вести .
(src)="13.1"> ဂျေကူစတာ ၏ အက်( ဖ်) ဘီ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံ
(src)="14.1"> မဂ်ဘူဟို ( စ်) ၏ အက်( ဖ်) ဘီ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံ
(trg)="12.4"> Ниже приведены изображения нескольких интернет-пользователей Филиппин , принявших участие в кампании не только путем использования типичного пустого профиля на сайте Facebook :
(src)="15.1"> ဂျူဒီ တာဂွေဝါလိုက ပျောက်ဆုံးနေသော တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစာရင်းဖြင့် ၄င်း ၏ ကိုယ်ရေးဓာတ်ပုံကို ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
(trg)="15.1"> Джуди Тагуивало обновила свою фотографию профиля со списком некоторых ' пропавших без вести ' активистов
(trg)="1.1"> Параолимпиада-2012 : успешное начало , незабываемые истории
(src)="1.2"> အောင်မြင်​ သော ​ နိဒါန်း ၊
(trg)="3.2"> В них принимают участие 4200 атлетов из 166 стран мира .
(src)="3.1"> ၂၀၁၂ခုနှစ်၊
(trg)="3.3"> Спортсмены соревнуются в двадцати дисциплинах .
(trg)="5.1"> Шарль Эль Мелиани ( Charles El Meliani ) , автор издания JOL press , отмечает , что на Параолимпиаду было продано рекордное число билетов :
(src)="1.5"> ပီ ​ အာ ( ပ ​ က ​ တန်ရ ​ ကျက်၊
(trg)="1.1"> Малайзия : недовольство предполагаемым изменением дизайна государственного флага
(src)="3.1"> ဆစ်( ခ်) ဖေ ​ လယ်​ စီကတော့​ အထူး ​ သ ​ ဖြင့် လွတ်လပ်​ ရေး ​ နေ့​ ကျင်းပ ​ နေ ​ စဉ်​ တွင်ထို ​ ကဲ့သို့သ ​ တင်း ​ မျိုး ​ ထွက်​ လာ ​ ခြင်း ​ သည်ရှက်​ စရာ ​ လုပ်​ ရပ်​ ဟု ထင်မြင်​ ခဲ့​ သည်။
(trg)="2.2"> Аешах Адлина Карим сообщила , что один из оппозиционных политиков написал на своей странице в Facebook , что нынешний флаг выглядит слишком похожим на флаг правительственной коалиции , а предлагаемый новый флаг очень схож с флагами Сингапура и Индонезии .
(src)="4.1"> မာဒေးကား ( လွတ်လပ်​ ရေး ​ နေ့) ဆို ​ တာ စည်း ​ လုံး ​ ညီညွတ်​ ခြင်း ​ အတွက်​ ပဲ ဖြစ်​ သင့် ​ ပါ ​ တယ်။
(src)="4.2"> ကျွန်တော်​ တို့တစ်​ နိုင်ငံ ​ တည်း ​ သား ​ အနေ ​ နဲ့အတူတကွ ရပ်​ တည်​ ပြီး ​ တော့​ ကျွန်တော်​ တို့နိုင်ငံ ​ အတွက်တိုက်​ ပွဲဝင်​ သင့် ​ တယ်။
(trg)="2.4"> Означает ли это , что они собираются превратить Малайзию в республику , поскольку Индонезия и Сингапур таковыми являются ?
(src)="4.4"> ကျွန်တော်​ တို့​ နိုင်ငံ ​ ရဲ့မွေး ​ နေ့​ ပွဲ ​ ကို ​ တောင်အတူ ​ ထိုင်​ ပြီး မ ​ ကျင်းပ ​ နိုင်​ ဘူး ။
(trg)="2.5"> Нынешний малайзийский флаг – сверху , снизу - предлагаемый новый дизайн флага .
(src)="5.1"> ဟုတ်​ တယ်၊
(trg)="2.6"> Фото из блога Аешах Адлины Карим
(src)="5.4"> ဒါ ​ မျိုး ​ လုပ်​ ဖို့ခင်ဗျား ​ တို့​ ကိုယ်ခင်ဗျား ဘယ်​ သူ ​ တွေ ​ လို့ထင်​ နေ ​ တာ ​ လဲ ။
(trg)="3.1"> Блогер Sicfallacy считает подобное действие бесчестным , особенно учитывая , что данная новость появилась во время празднования Дня независимости :
(src)="5.5"> တိုင်း ​ ပြည်​ အတွက်ရှက်​ ဖို့​ ကောင်း ​ လိုက်​ တာ ။
(trg)="4.1"> Мердека – это день единения .
(src)="5.8"> ကျွန်တော့် ​ အထင်တကယ်​ လို့ပီ ​ အာ ( ပ ​ က ​ တန်ရ ​ ကျက်၊
(trg)="4.2"> Мы , как соотечественники , должны быть вместе и бороться за нашу страну .
(src)="5.9"> အတိုက်​ အခံ ) ပါ ​ တီ ​ သာ နောက်​ လာ ​ မယ့် ၁ ​ ၃ ​ ကြိမ်​ မြောက်အထွေ ​ ထွေ ​ ရွေး ​ ကောက်​ ပွဲ ​ မှာ အနိုင်​ ရ ​ ရင်ဒါ ​ တွေ ​ ဟာ မလေးရှား ​ မှာ သေချာ ​ ပေါက်​ ဖြစ်လာ ​ မယ့် အရာ ​ တွေ ​ ပဲ ။
(src)="5.10"> ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ကြည့် ​ ရ ​ တာ အစိုးရ ( ဝန်ကြီး ​ အဖွဲ့) သာ ​ မက ​ ဘဲ မလေးရှား ​ ရဲ့ကိုယ်​ ပိုင်​ လက္ခဏာ ​ ကို ​ ပါ ပြောင်းလဲ ​ ချင်​ ပုံ ​ ရ ​ တယ်။
(trg)="4.3"> Но в этом году на праздновании Мердека мы не можем прийти к единому мнению даже насчет девиза , мы даже не можем сесть и вместе отметить рождение нашей нации .
(src)="7.2"> မော်တော်​ ဆိုင်​ ကယ်​ ကို တစ်​ နေရာ ​ ရာ ​ မှာ ရပ်​ ထား ​ တဲ့င ​ ပြိန်း ​ တွေ တွေ့​ ရ ​ တယ်။
(trg)="4.4"> Мы разделены двумя девизами , двумя эмблемами и даже двумя разными флагами .
(src)="7.4"> ဒီ ​ တော့သူ ​ တို့​ လည်း မလေးရှား ​ အလံ ​ ကို ပြောင်း ​ ချင်​ နေ ​ ကြ ​ တယ်။
(trg)="5.2"> Однако это не дает вам права гордо высмеивать наш флаг в столь важный день !
(src)="8.1"> နိုင်​ ငံတော်​ သီချင်း ​ ရော ဘယ်​ လို ​ လဲ ။
(trg)="5.3"> Кем вы себя считаете , если позволяете себе подобное ?
(src)="8.2"> သူ ​ တို့​ အလံ ​ ကို ပြောင်း ​ မယ်​ ဆို နိုင်​ ငံတော်​ သီချင်း ​ ကို ​ ရော ဘာ ​ လို့​ မ ​ ပြောင်း ​ တာ ​ လဲ ။
(src)="8.3"> သီချင်းက ​ ဟောင်း ​ တဲ့​ အထဲ ပါ ​ နေ ​ ပြီ ​ လေ ။
(trg)="5.5"> Либерийский флаг тоже напоминают флаг США , но видели ли вы либерийцев , которые говорят о своей ненависти к их флагу во время празднования Дня независимости ?
(src)="8.6"> သူ ​ တို့​ တွေ နိုင်​ ငံတော်​ သီချင်း အသစ်​ ကို ​ ရေး ​ ထုတ်ပေး ​ ဖို့namewee ကို ​ တောင်ခေါ်​ ချင်ခေါ်​ နိုင်​ တယ်။
(trg)="5.7"> Похоже , что PR хочет изменить не только правительство ( кабинет министров ) , но и лицо нации .
(src)="9.1"> ပြီး ​ တော့ဘာ ​ လို့​ အလံ ​ နဲ့နိုင်​ ငံတော်​ သီချင်း ​ မှာ ​ တင်ရပ်​ နေ ​ မှာ ​ လဲ ၊
(src)="9.2"> နိုင်ငံ ​ နာမည်​ ကို ပြောင်း ​ လိုက်​ ရင်​ ရော ။
(trg)="5.8"> Новый флаг , новый гимн , а может быть и новое название страны ?
(src)="9.3"> ကြီး ​ မြတ်​ သော မ ​ လာ ​ ယာ ​ လမ်​ ဆို ​ ရင်​ ရော ၊
(trg)="5.9"> Сайед Али Акбар также выразил недовольство данной ситуацией :
(src)="9.7"> စင်​ ကာ ​ ပူ ​ မြောက်​ ပိုင်း ၊
(trg)="6.1"> Протестующие , размахивающие предлагаемым новым флагом .
(src)="9.10"> ဒါ ​ မှ ​ မဟုတ်ကြီး ​ မြတ်​ သော ဒ ​ မန်​ ဆာ ​ ရာ ၊
(trg)="6.2"> Фото из блога Сайед Али Акбара
(src)="10.1"> ပ ​ က ​ တန်​ ရာ ​ ကျက်​ ပါ ​ တီ ​ သည်မလေးရှား ​ နိုင်ငံ ​ ၏ ​ အလံ ​ ကို အစားထိုး ​ ပြောင်းလဲ ​ မည်​ ဆို ​ သော ကောလာဟလ ​ နှင့် ​ ပတ်​ သတ်​ ၍ ပြန်လည်​ ဝေဖန်​ တိုက်ခိုက်​ ရန်ယမန်နေ့​ က ​ ဝန်ကြီး ​ ချုပ်ဒါ ​ တွတ်​ ဆ ​ ရီ နာ ​ ဂျစ်( ဘ်) ရာ ​ ဇတ်( ခ်) ကိုယ်တိုင်ညီညွတ်​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့​ အစည်း ​ မှ အထက်​ တန်း ​ ဝန်ကြီး ​ သုံး ​ ဦး ​ ကို ဦးဆောင်​ လိုက်​ သည်မှာ ညီညွတ်​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့​ အစည်း ​ နှင့် ပတ်သက်​ ပြီး ၄င်း ​ တို့​ ၏ ကြံမိ ​ ကြံ ​ ရာ ​ တုန့် ​ ပြန်​ မှု ​ များ ​ သည်အမှန်​ တရား ​ ကို ​ လေးစား ​ ခြင်း ​ ထက်၄င်း ​ တို့​ ၏ ( ၁ ​ ၃ ) ကြိမ်​ မြောက်​ ရွေး ​ ကောက်​ ပွဲ ​ ဖြစ်မြောက်​ ရေး ​ ကို အရာ ​ ရာ ​ အားလုံး ​ ထက်​ ပို ​ ပြီး အလေး ​ ထား ​ နေ ​ ကြောင်း ထင်​ ဟပ်​ စေ ​ သည်။
(trg)="7.1"> Когда вчера премьер-министр Наджиб Тун Разак лично возглавил трех министров ОМНО ( Объединённой малайской национальной организации ) в их нападках на Rakyat Pakatan из-за ложных слухов , что PR хотели заменить национальный флаг Jalur Gemilang , то это , прежде всего , отразило его отчаяние по поводу перспектив ОМНО / Национального фронта на предстоящих тринадцатых всеобщих выборах , а не истинное положение дел .
(src)="12.4"> အထူး ​ သ ​ ဖြင့် " ဖွဲ့​ စည်း ​ ပုံ ​ အခြေ ​ ခံ ​ ဥပဒေ ​ နှင့် ​ ညီ ​ သော အဖွဲ့​ အစည်း ​ များ ​ ၏ အခန်း ​ ကဏ္ဍ ​ နှင့် ​ တာဝန်​ ကို ကာ ​ ကွယ်​ ရန်" သည်ပီ ​ အာ ​ ၏ တာဝန်​ ကျေပွန်​ မှု ​ ကို အလေး ​ အနက်​ ဆို ​ ပြ ​ ခဲ့​ သည်။
(trg)="8.2"> Эти нападки были явно придуманы « департаментом грязных делишек » ОМНО / Национального фронта , так как в утверждениях , что PR хотел изменить национальный флаг или упразднить систему конституционной монархии , нет ни капли правды .
(src)="13.1"> ဝန်ကြီး ​ ချုပ်​ နှင့် ညီညွတ်​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့​ အစည်း ​ မှ အထက်​ တန်း ​ ဝန်ကြီး ​ များ ​ အနေ ​ ဖြင့် ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ​ က ​ နိုင်ငံ ​ အလံ ​ ကို ​ ပြောင်းလဲ ​ ၍ မလေးရှား ​ ကို ​ သမ္မတ ​ စနစ်​ ပြောင်းလဲ ​ ချင်​ သည်​ ဆို ​ သည့် ကောလာဟလ ​ က ​ ကို ဝန်ကြီး ​ များ ​ ထပ်ခါထပ်ခါ ​ ပြော ​ နေ ​ စဉ်​ တွင်ပီ ​ အာ ​ ပါ ​ တီ ကို ​ ဆန့် ​ ကျင်​ ၍ ညီညွတ်​ သော ​ မ ​ လေး ​ အမျိုးသား ​ အဖွဲ့​ အစည်း ​ မှ အောက်​ တန်း ​ ကျ ​ သော လှည့် ​ စား ​ မှု ​ ဌာန ​ ၏ မုသား ​ နှင့် မ ​ မှန်ကန်​ သော လှုံ့ဆော်​ မှု ​ ကို ဦးဆောင်​ နေ ​ သည်မှာ အလွန်​ တာဝန်​ မဲ့​ ရာ ​ ကျ ​ သည်။
(trg)="9.1"> Pakatan Rakyat неоднократно в своих политических заявлениях , в том числе в заявлении об общей политике Pakatan Rakyat в декабре 2009 года и в долгосрочном плане Buku Jingga в декабре 2010 года , подтверждал готовность PR сохранять основные функции малайзийской конституции , в частности , « защищать роль и надежность института конституционной монархии » .
(trg)="9.2"> Это верх безответственности , что премьер-министр и министры ОМНО / Национального фронта возглавляют кампанию лжи , придуманную « департаментом грязных делишек » и направленную против PR , а четыре министра ОМНО повторяют слухи , что PR хотел изменить государственный флаг и превратить Малайзию в республику .
(trg)="9.3"> Перевод : Полина Лурье
(src)="1.1"> အင်​ တာ ​ နက်လွတ်လပ်​ ခွင့် ကြေညာ ​ စာ ​ တမ်း
(trg)="1.1"> Декларация о свободе в Интернете
(src)="1.2"> အားလုံးသတိပြုမိကြတဲ့အတိုင်းပဲ ကမ္ဘာကြီးဟာ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ပတ်သက်လာရင်အရေးပါတဲ့အချိန်ကို ရောက်နေပါပြီ ။
(trg)="1.2"> Как многие уже заметили , сейчас в мире настал решающий момент в ситуации со свободой в Интернете .
(src)="2.1"> ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းက အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကို တိုက်ယူဖို့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေက ဘယ်တုန်းကမှနဲ့မတူတဲ့ညီညွတ်ခြင်းမျိုးနဲ့တူ ⁠ တူလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
(trg)="1.3"> Во многих странах по всему миру издаются новые законы , призванные подвергнуть цензуре интернет-пространство , в то время как блогеры рискуют все больше и больше , открыто высказывая свое мнение .
(src)="2.3"> ကျွန်တော်ကျွန်မတို့တွေ အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ပွင့် လင်းမြင်သာမှုကို အာရုံဝင်စားခဲ့ကြပါတယ်။
(trg)="3.1"> Учитывая это , несколько групп недавно собрались вместе , чтобы составить Декларацию за свободу в Интернете .
(src)="3.1"> ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ကြေညာစာတမ်းကို ဖန်တီးဖို့အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များ ⁠ များက လတ်တလောမှာ လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်၊
(trg)="3.2"> Проект Global Voices Advocacy был одним из первых , кто подписал эту декларацию .
(trg)="3.3"> На сегодняшний день эта декларация была подписана более 1300 организациями и компаниями , число которых продолжает расти .
(src)="3.6"> EFF , Free Press , Access နဲ့Cheezburger .
(trg)="3.4"> Ниже сможете найти оригинал документа .
(src)="3.7"> တောင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ ပါ ⁠ ပါတယ်။
(trg)="3.5"> Поставить свою подпись можно здесь .
(src)="5.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကမ္ဘာတစ်ခုကို ယူဆောင်လာနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(trg)="3.6"> Кроме того , вы можете принять участие и через другие организации , как " EFF " , " Free Press " , " Access " и даже " Cheezburger " .
(src)="5.5"> ပို ၍ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းနှင့် ပို ၍ ပွင့် လင်းမြင်သာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင်များကို သယ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့် မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
(trg)="5.1"> Мы полагаем , что свободный и открытый интернет может сделать мир лучше .
(trg)="5.2"> Для поддержания интернет- пространства свободным и открытым , мы обращаемся к местным сообществам , производствам и странам с просьбой о признании этих принципов .
(src)="7.7"> အင်တာနက်ကသာ ၄င်းတို့ကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိ ၍ ဖြစ်ပါသည်။
(trg)="5.3"> Мы полагаем , что они помогут привнести больше креативности , создать больше инноваций и больше открытых обществ .
(trg)="6.1"> Мы присоединяемся к международному движению за защиту наших свобод , потому что мы верим , что они стоят того , чтобы за них боролись .
(src)="9.1"> ကြေညာချက ်
(src)="10.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်၍ ပွင့် လင်းမြင်သာသော အင်တာနက်အတွက်ရပ်တည်ပါသည်။
(src)="11.1"> ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်လစီကိုဆောင်ရွက်ရာနှင့် အခြေခံမူဝါဒ ငါးချက်ကို တည်ဆောက်ရန်အတွက်ပေါ်လွင်၍ အများပါဝင်နိုင်သော လုပ်ရပ်များကို အားပေးထောက်ခံပါသည်။
(trg)="7.1"> Давайте обсуждать эти принципы - соглашаться с ними или не соглашаться , полемизировать над ними , переводить их на разные языки , усваивать их и расширять эту дискуссию в нашем сообществе - так , как только Интернет может сделать это возможным .
(src)="12.1"> ထုတ်ဖော်ခြင်း ၊
(src)="12.2"> အင်တာနက်ကို ဆင်ဆာမဖြတ်ရန ်
(trg)="8.1"> Присоединяйтесь к нам в сохранении Интернета свободным и доступным всем .
(src)="13.1"> ရယူအသုံးပြုခြင်း ၊
(trg)="10.1"> Мы выступаем за свободный и открытый Интернет .
(trg)="12.1"> Самовыражение : Нет цензуре в интернете .